Etu esi eji ngwaọrụ ndị ExFAT arụ ọrụ na Linux | Site na Linux
Etu esi eji ngwaọrụ ndị ExFAT arụ ọrụ na Linux
Oge ụfọdụ gara aga ha degaara anyị akwụkwọ gbasara enweghị ike inwe ike iji ngwaọrụ ExFAT na Linux, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe a na-ahụkarị iji nweta draịva etolitere n'ụdị a, ndị distros niile ga-enwe ike ijikwa ha na ndabara, ọ bụrụ na distro gị abụghị otu n'ime ndị nwere ihu ọma ma ị nwebeghị ike iji ngwaọrụ gị na a nkuzi anyị na-atụ anya na ugbu a ị nwere ike ime ya.
1 Kedu ihe bụ EXFAT?
2 Etu esi eji ExFAT draịva na Linux?
Kedu ihe bụ EXFAT?
Ọpụ Ọ bụ sistemụ ọkụ ọkụ, nke emepụtara na ebumnuche nke iji ya na draịva ọkụ ebe ọ bụ usoro dị ọkụ karịa NTFS, nke a bụ usoro dakọtara na sistemụ arụmọrụ niile dị ugbu a, mana na ụfọdụ distros anaghị ebuli na-akpaghị aka ngwaọrụ.
Otu ọghọm nke ExFAT bụ na ọ nweghị ọtụtụ nchekwa dịka NTFS, mana ọ bụrụ na ọ gafee oke nke FAT32 a ma ama, agbanyeghị, isi ojiji nke ExFAT bụ ịkwadebe ngalaba multimedia nke ga-emecha rụọ na ngwaọrụ dịka telivishọn, vidiyo vidiyo. , ekwentị, egwuregwu n’etiti ndị ọzọ.
ExFAT na-enye ohere faịlụ nke nha ọ bụla na nkebi na-enweghị mmachi, yabụ a kwadebere ya maka nnukwu diski yana ngwaọrụ ndị ọzọ nwere obere ikike.
Etu esi eji ExFAT draịva na Linux?
Mgbe ụfọdụ gị distro ghotara na ngwaọrụ ma na-egbochi ohere ka akwụkwọ ndị echekwara na ya, n'agbanyeghị ihe nsogbu gị bụ, ihe ngwọta bụ otu. Naanị anyị ga-etinye exFat na iwu ndị a:
Mgbe nke a gasịrị, anyị nwere ike iji ngwaọrụ anyị n'ụzọ ziri ezi. N'ọnọdụ ụfọdụ nsogbu ahụ dịgidere, maka nke a, anyị ga-emerịrị folda multimedia ahụ na iwu ndị a:
Ọzọ anyị ga-etinyerịrị ngwaọrụ anyị na ndekọ ndekọ kwekọrọ na iwu ndị a:
Ọ bụrụ na ịchọrọ iwepụ ngwaọrụ anyị na-eme iwu ndị a:
Site na usoro ndị a dị mfe ma dị ike anyị ga-enwe ike iji ngwaọrụ ọ bụla nwere usoro ExFAT na-enweghị nsogbu ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Etu esi eji ngwaọrụ ndị ExFAT arụ ọrụ na Linux
Ezigbo post dị ezigbo mkpa, na-aga n'ihu otu a, m ga-enwe ekele dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị nwere ike inyere m aka na obere obi abụọ, etinyego m Ubuntu na PC desktọọpụ m, yana ọ dị m mkpa ịwụnye Windows, ha tụrụ aro ikewa disk na ịwụnye, mana amaghị m olee otu ị ga-esi nwetaghachi ohere ịnweta ngalaba Windows Ekele
$ sudo melite-grub2
Zaghachi ka ebule_17
Ọ bụ ezie na afọ gara aga anyị si na grub gaa grub2, $ sudo update-grub ga-adakọ ma rụọ ọrụ maka grub2.
N'aka nke ọzọ a na m eche, emebeghị m ya ọtụtụ afọ, ọ bụrụ na ọ gaghị adị mkpa iji wụnye nhazi ọhụrụ a na $ sudo grub-install / dev / sda, melite-grub2 enweworị nzọụkwụ ikpeazụ a? N'ihi na anaghị m ahụ iwu grub2-wụnye.
Ndị na-agba ọsọ dijo
Edemede dị ukwuu, daalụ maka ị rụọ ọrụ a.
Onwe m na-eji sistemụ faịlụ a oge niile. Mana ọ bụ eziokwu na na Linux ọ na-enye ụfọdụ nsogbu.
Enwere m Ubuntu 20.04
Mgbe ịmechara ihe niile ị na-egosi:
#sudo apt wụnye exfat-fuse exfat-utils
Enwetara m ozi a:
Gbanyụọ exfat 1.3.0
NJR:: emeghere imeghe '/ dev / sdb1': Enweghị faịlụ ma ọ bụ ndekọ dị otú ahụ.
Enwere m draịva ike 2 2Tb nke m na - enweghị ike iji maka na sistemụ faịlụ ha dị na exfat
Otu esi ahụ ọnụahịa nke Bitcoin na ndị ọzọ Cryptocurrencies site na ọnụ ya